Shil Ka Dhacay Hargeysa – Berbera OoDhaawac iyo Dhimasho Keenay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shil Ka Dhacay Hargeysa – Berbera OoDhaawac iyo Dhimasho Keenay
Shil Ka Dhacay Hargeysa – Berbera OoDhaawac iyo Dhimasho Keenay
Shilgaari oo maanta ka dhacay inta u dhexysa Berbera iyo Hargeysa ayaa waxaa ku dhintey hal qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex qof oo dhamaantood ay ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan Somaliland.
Waxaa ku dhintey Shilkaas gaari Guddoomiye kuxigeenkii saddexaad ururka siyaasiga ah ee Waddani Cabdullaahi Siciid Dheere, waxaana ururka Waddani hoggaamiya Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Cirro.
Sidoo kale waxaa ku dhaawacmey Xildhibaan Cali Xaaji iyo Guddoomiye kuxigeenkii 4aad ee Xisbiga Waddaniga Raygal Beegsi.
Shilka Gaari ayaa yimid xili la soo dhaweynayey Guddoomiyaha Xisbiga Waddani, isla markaana ah guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Camdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro)) oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Berbera.
Bisha danbe deegaanada Somaliland waxaa looga dioyaargaroobayaa doorashooyinkii golahayaasha deegaanka iyada oo Xisbiga ugu da’da weyn Somaliland ee UDUB ay qaadaceen doorashooyinka, kadib markii ay sheegeen in Xisbigooda farogelin ay ku hayaan guddiga doorashooyinku.